ကမ္ဘာ့ပြိုင်ဘက်ကင်း ရေဒါစနစ်အသစ်ကို တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရုရှား ( ရုရှားတို့ က လုပ်လိုက်ရင် အကြမ်းကြီး အဆန်းကြီး..)
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေး ရေဒါ “ရာ့ခရိုမာ” Yakhroma ကို ချူ့ခိုးစခဲ ပင်လယ်ဘက်တွင် ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ အပြီးသတ် တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ့ဒေသဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အလက်စကာ ပြည်နယ်နှင့် အများကြီးမဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။
ဒီရေဒါဟာ အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး ရေဒါစခန်းမှာအမြဲတမ်း ၀န်ထမ်းကိုအသုံးပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ သိရပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင် ရုရှားကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး Sergei Shoigu က နှစ်ကုန်ဝန်ကြီးများဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကရင်းဒေသရှိ ရှိ ဆီဗာစတူပေါ တွင် Yakhroma ရေဒါကို စတင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဟာ ဒီ ရေဒါရဲ့ separate nodes တွေကို လေကြောင်းပစ်မှတ်တွေရှာဖွေဖို့ရာ ကာလီနင်ဂရတ်၊ ဇီး နှင့် ဗော်ကူတာ ဒေသတွေမှာလဲ တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားသွားပါသေးတယ်။
ဒီရေဒါမှာ လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တွေ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနှင့် တခြား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေပါ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
ရရှိထားသောသတင်းများအရ ယခု ရေဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း ရေဒါဖြစ်လာဖွယ်ရှိပြီး မီတာ၊ စင်တီမီတာ၊ ဒက်စီမီတာ၊ မီလီမီတာ အစရှိသဖြင့် ကြိမ်နှုန်းလေးမျိုးဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၂၇၀ ဒီဂရီမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ရှရုားဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်မှာ အလွှာ ၂ ခုဖြင့်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Tundra လို့ခေါ်တဲ့ အာကာသဂြိုဟ်တု ၄ ခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မြေပြင်ကွန်ယက် Voronezh ရေဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတည်ဆောက်မယ့် ရာ့ခရိုမာ ရေဒါအဓိကလုပ်ဆောင်မယ့် တာဝန်ကတော့ ရုရှားနိုင်ငံပိုင်နက်နှင့် သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံများဆီဝင်ရောက်လာမယ့် တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်တွေကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ယခုနှစ်မှအစပြုမယ့် ဒီရေဒါစနစ်ဟာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ချူ့ခိုးစခဲ ပင်လယ်ဘက်အထိ ကွန်ယက်ချဲ့ထွင်ပြီးစီးမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်
သာကောတို့ ထောင်ချောက်ဆင်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး (DIGITAL CURRENCY) အကြောင်း တစေ့စောင်း…( ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစီမံကိန်းသာအောင်မြင်သွားရင် သာကောတို့ဟာ လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ ငွေကြေးတွေကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရသွားမှာပါ….)
ဘီယာနဲ့အာလူးကြော် နည်းလမ်းပြောင်းလုပ်ရင်းကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်နိုင်တော့မည့် နည်းလမ်း.. ( နောက်ဆို ပြောင်းဖူးတို့ ဂျုံတို့ကနေပြီးတော့လည်း ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်တော့မယ်တဲ့….)
ရုံးတင်ခံရဦးမည့် ရုရှားလေထီးတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်သူ၊ ဈေးဝယ်အဆောက်အဦးတစ်ခုကို မတော်တဆပစ်ခတ်မိ